एनिमेबाट सिकिने जापानी जिबन शैली | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > एनिमेबाट सिकिने जापानी जिबन शैली
एनिमेले, हामी सबैलाई थाहा छ, जापानीहरूको जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। जब तपाईं शब्द “एनिमे” भन्नुहुन्छ, पहिलो शब्द दिमागमा आउँछ “जापान र जापानी।” तर सबै भन्दा पहिले, मूल कुराको साथ सुरू गरौं – एनिमे भनेको के हो र यो कसरी नियमित कार्टुनबाट भिन्न छ?
के हो त एनिमे?
एनिमे एनिमेसनको छोटो रुप हो। यो जापानीमा काताकानामा लेखिन्छ ’cause यो मूल रूपमा एक विदेशी शब्द हो। एनिमे कलाको एक रूप हो जुन जापानी एनिमेटेड चलचित्रहरूलाई जनाउछ। सबै एनिमेसनलाई एनिमे भन्न मिल्दैन। यद्यपि, एनीममा पनि फिल्महरू वा पुस्तकहरू जस्तै आफ्नै आनेकै जनरा हुन्छ। नाटक, कमेडी, जीवनको टुक्रा, अलौकिक, कामुक र यस्तै अन्य छन। केही शब्दकोशहरूमा एनिमेलाई “जापानी शैलीको एनिमेटेड फिल्म वा टेलिभिजन मनोरन्जन” वा “जापानमा सिर्जना गरिएको एनिमेसनको शैलीको रूपमा परिभाषित गरिन्छ। यदि तपाई एनिमेमा रुचि राख्नुहुन्न भने पनि तपाई यो बिचार गर्नु होस् सक्नुहुनेछ कि जापानी एनिमेसन शैली र कलाकृति पश्चिमी शैली भन्दा धेरै फरक छ।
एनिमे र कार्टुनमा के भिन्नता छ?
Old men in cartoons vs. Old men in anime pic.twitter.com/rKf9YqpCVq
— qillua (@qberserkk) January 8, 2020
यदि तपाईंलाई एनिमेस मनपर्दछ भने, तपाईंमा यो जिज्ञाशा पक्कै होला। यदि तपाइँ गर्नुहुन्न भने, तपाई सायद यस बिषयमा सोच्नु भएको होला। सहज रुपमा कसैले यो भन्न सक्दछन् कि मनोरञ्जनको प्रकारको रूपमा दुईमा वास्तवमा कुनै भिन्नता छैन। औपचारिक रूपमा, कुनै पनि विधि जसले स्क्रिनमा कार्यलाई नक्कल गर्दछ त्यसलाई एनिमेसन भनिन्छ। दुबै एनिमे र कार्टुन एनिमेटेड मनोरन्जन कार्यक्रम हो, जुन या त क्रमबद्ध वा फिचर चलचित्रको रूपमा देखाइन्छ
एक व्यक्तिले सहजनै भन्न सक्दछ कि तिनीहरू एकै चीजका बिभिन्न किसिम हुन्। दुबै कार्टुन र एनिमे हातले कोरिएका छविहरू वा हस्त-कलाले बनाइएका हास्य एनिमेसनहरूहरु हुन्। (हालसालै कम्प्युटरले बनाइएको वा एनिमेटेड पनि, तर त्यो पूर्ण भिन्न विवादास्पद विषय हो)।
अझै, एनिमे र कार्टुनहरू तिनीहरूको दृश्य विशेषताहरू (अनुहार, अभिव्यक्तिहरू) सँग फरक छ, अवधारणा (कार्टुनहरू सामान्यतया हल्का हुन्छन् जबकि एनिमेस बच्चा देखि वयस्कमा अनुकूल हुने हुन्छन), र विषय / विषयवस्तु (कार्टुनहरू हासो ल्याउने मनसाय राख्छन् जबकि एनिमे ज्यादातर जीवन मुद्दाहरू वा मानवीय भावनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ र कहिलेकाँहि हिंसा वा यौन संदर्भ पनि देखिन्छ)।
यो बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ, पश्चिममा वयस्क कार्टुनको वृद्धिले राजनीति, विवाद, हिंसा र यस्तै अन्य चीजहरू सामना गरेर कथामा देखाउदै छ। उदाहरणको लागि साउथपार्क, बोज्याक हर्सम्यान, वा रिक एण्ड मोर्टि लिनुहोस्। जे होस्, भिजुअल शैलीमा भिन्नता कायम रहन्छ, त्यसैगरी एनिमेसन प्रविधि र आवाज अभिनय पनि फरक हुन्छ। एनिम अधिक परिपूर्ण हुन्छ, जबकि कार्टुनहरू परिपूर्ण चित्रित र एनिमेटेड हुदैनन्। कार्टुनमा कहानी र संवादमा अधिक ध्यान केन्द्रित गरिन्छ।
#GrowingUpWithAnime When Sanji used to smokealollipop. pic.twitter.com/rbPyedAt2S
— Matthew (マシュー) (@InazumaBuster) July 22, 2015
अन्तमा, सांस्कृतिक भिन्नताहरू सधैं स्पष्ट हुन्छन्। यो पात्रहरूको बोली र गतिविधिहरू बाट देखाइन्छ। एउटा प्रसिद्ध उदाहरण हो रगत, प्राय: जापानी टिभीमा सेन्सर हुन्छ, जबकि यो अमेरिकी टिभीमा प्रशस्त छ। अर्कोतर्फ, एनिमेमा धुम्रपान गरिएको देखाउन सकिन्छ, तर तिनीहरूको सिगरेट सेन्सर गरिन्छ जब समान शो अमेरिकामा प्रसारित हुन्छ।
जापानी जिबन शैलीमा एनिमेको छाप
Is it just me that almost anime classroom scene I've seen, math is their lesson? pic.twitter.com/1aUNG2t6qm
— Shua (@Jisoooshua) March 14, 2020
हामी सबैलाई थाहा छ कि एनिमेसको सही विधा हेर्नाले जापानी मानिसको दैनिक जीवनको ’boutमा जानकारी दिन्छ। कहिलेकाँही राक्षसहरूसँग लड्ने अलौकिक विधाको एनिमेले पनि स्कूल वा घरमा दृश्यहरू यथार्थ देखाउछन्। उनीहरूले कसरी खादछन्, त्यसबाट उनीहरूले मानिसहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरा हामी जापानी एनिमेमा देख्छौं। साथै, विभिन्न अनौंठो जापानी गतिविधि एनिमेमा चित्रित छन्। उदाहरण को लागी किमी नी तोदोके र तोरादोरा (दुबै रोम-कम एनिमे) ले स्कूल उत्सव, जापानी सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउँदछ जुन आइकोनिक छन्। धेरै एनिमेसनहरूले ग्रीष्मको फायरवर्क उत्सवहरू वा धार्मिक माचुरी चाडहरू पनि देखाउँछन्, जुन कार्यसँग सम्बन्धित नभए पनि महान र सत्य रूपमा देखाइन्छ। आधुनिक समयमा भइरहेको एनिमले जापानी क्रिसमस र नयाँ वर्ष पनि देखाउछ जुनले हामीलाई जापानको सांस्कृतिक अभ्यासहरू जस्ताको तेस्तै देखाउछ।
delicious and appetizing anime food
― 🍱amouth-watering thread pic.twitter.com/4SOuDXLjla
— dani⁷ | LINNY DAY 🎂🎈 (@tetsurouslut) March 12, 2020
जापानी खाना सधैं एनिमेमा हुन्छन्। वास्तवमा, मैले जापानी खाना नदेखाईएको एनिमे भेटाएको छैन। कम्तिमा पनि एक वा बढी जापानी पकवान एनिमेमा दुरुस्तै देखाइन्छ। त्यहाँ जहिले पनि एक निश्चित एपिसोड हुन्छन् जसमा उनीहरू ओनिगिरी वा बेन्तो खान्छन्। स्कूल रम्बलमा एनिमेमा, करी भात र ओनिगिरी भनेको साधारण भोजन हो जुन तपाईं सबै एपिसोडहरूमा भेट्टाउन सक्नुहुन्छ, जबकि नारुतोमा उ निरन्तर रामेन खान्छ। जिबिलीको एनिमेलाई लामो समय देखि सुन्दर खाना पकाउने दृश्यहरूको लागि पनि चिनिन्छ।
जापानीहरुको प्रचलित दृष्टिकोण र व्यक्तित्व पनि एनिमे मार्फत देख्न सकिन्छ। एनिमे जापानबाट आएको र कलाकारहरू जापानी हुने भएकोले, सम्भवतः चरित्रहरूको व्यक्तित्व जापानी मानिसहरूमा मिल्ने हुन्छन्। धेरै जसो एनिमेसनले समाजले मित्रतालाई मन पराउँने, एक अर्कालाई मद्दत गर्ने जस्ता पाठ सिकाउने प्रयास गर्दछ। अवश्य पनि, सकरात्मक पाठ, एनिमेको विधामा पनि निर्भर गर्दछ, तर फ़ेण्टेसि विधामा पनि एनिमेको प्रमुख कलाकार संग जापानी सभ्यता संग मिल्ने मानक देख्न सकिन्छ।
अन्त्यमा, एनिमे जापानी भाषामा अंग्रेजी सबटाईटल राखेर हेर्दा तपाईंलाई भाषा सिक्न पनि धेरै मद्दत गर्दछ। विशेष गरी शब्दको उच्चारण र विभिन्न सन्दर्भमा अनेकौ शब्दहरू प्रयोग गर्ने तरिका सिक्न एनिमे हेर्नु जस्तो उत्तम माध्यम अरु छैन।